Indonesia in Focus: Wax wanaagsan u sameeya labada waalid (hooyaday)
Wax wanaagsan u sameeya labada waalid (hooyaday)
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (331)
(Qaybta saddex boqol iyo kow iyo soddon), Depok, West Java, Indonesia, August 4, 2015, 00:05 pm).
In filimka Saving Private Ryan sameeyey Hollywood sheeko of hooyo u ah Mareykanka u sheegay oo dhan uu afar caruur ah adeega ciidanka ee dagaalkii labaad ee dunida, oo markii ugu seddex caruur ah ayaa ku dhintay dagaalka kala duwan, iyo kuwo kale, ayaa lagu dilay Papua New ginigu ciidanka ka hor Japan ,
In sheekadan ka dibna la sheegay in Rosevelt Madaxweynaha, kaas oo markaas iyada oo Wasaaradda Difaaca amar ku bixiyay in ay soo diraan koox ka mid ah askarta ciidamada gaarka ah ee filimka bilowday Tom Hanks sida Captain John Miller si uu u hoggaamiyo raggiisii ​​si ay u badbaadiyaan ilmaha ka hooyada afar badbaaday (bidix) waa marka ay dhexe ee dagaalka ka dhanka ah ciidamada Jarmalka ee Yurub. Ugu dambeyntii xitaa taasoo lid ku ah nolosha John Miller iyo raggiisii ​​waxay ku guulaysteen in ay helaan iyo badbaadin Private James Ryan, si ay u sii noolaadaan oo ku soo celi laabta hooyadiis oo dalka Mareykanka ah.
Sheekada Arrintan ayaa muujineysa sida jacaylka hooyo si ay carruurteeda ku hanjabay dagaal yaraaday, aad ayay ugu qanacsan dhammaan dhinacyada, iyo sidoo kale in Islam sida Jacayl ah labada waalid, gaar ahaan hooyada carruurta iyada oo adeegyada hooyo ayaa soo sara kiciyey carruurteeda laga bilaabo naas-nuujinta si kor loogu qaado ma waxaa lagu Abaal marin karaa wuxuu maalka badan oo kaliya, laakiin u kaliyeeli dharma si buuxda ilmaha in labada waalid, gaar ahaan hooyada.
Sidaa darteed Eebe Surah An-Nisa aayadda 36 waxa uu inoo sheegayaa ka dib markii la addeeco Eebe, Rasuulkiisa iyo baarri labadiisa waalid.
Al Quraanka Surah An-Nisa aayadda 36
"Caabuda Eebe hana isaga wadaajin waxba. Oo haddana wax wanaagsan u sameeya labadiisii ​​hooyo aabbe, ku dhow-qaraabada, Agoonta, dadka saboolka ah, deriska deriska dhow iyo ka fog, iyo facooda, sabil ibn, iyo sahayamu addoon ah. Eebe ma Jeela kuwa is kibriya oo ku faana oo is "(An-Nisa ': 36)
Ilaaha Qaadirka ah ku sadarkaan, amray in ay caabudaan oo kaliya in ay Ilaaha Qaadirka ah, oo aan la wadaaga la wadaajin. Maxaa yeelay, Ilaaha Qaadirka ah oo dhab ah, waa nuxurka ka mid ah Siinta Rizki, ni'mat, iyo damacbadnaan in Caalamka meel kasta oo ay xaaladdu. Markaas waxaa xaq ah Ilaaha Qaadirka ah, oo ka addoon kasta oo aan u caabudilahaa oo isaga wadaajin waxba. 
Muhammad sheegay in xadiis:
Nabiyow, ayaa sheegay in Mu'adh "Ma garanaysaan xuquuqda Ilaaha Qaadirka ah, Addoomadiisa?" Mu'adh jawaabay "Eebe iyo Nabiga fiican" Rosullah yiri "Waa in ay isaga caabudo oo aan wada-hawlgalayaasha wadaajin wax "Muhammad danbe ayuu haddana arkay, mar kale weydiin" baad ku garanaysaa, waxa xuquuqda addoonkii ku xusan Ilaaha Qaadirka ah, haddii ay sameeyaan in? Ie uu (Eebe) ma Jirdilka "
In faallo ah ee al-Tataruska ku jira sabab looga dhigayo in shirk u qaybsan yahay saddex heer, kuwaas oo dhammaantood waxaa loo reebay, sida soo socota:
1. shirk inay aaminsan yihiin in Ilaah kale ma Ilaaha Qaadirka ah. Tani category ee shirk shirk waa a'dzom (warwareego ugu weyn) shirk shirk Jaahil ah oo waxa loogu hadalka oo Ilaaha Qaadirka ah:
"Dhab ahaan yaa Eebe ma dembiga shirk ka cafiyi doonaa, oo uu kala cafiya dembiyadaada oo dhan ka (shirk), u fidiyaa cidduu doono" (An-Nisa ': 48)
2. Midda labaad waxaa shirk shirk ayaa aaminsan in mid ka mid ah lama aan fara gelin ku sameeyeen Ilaaha Qaadirka ah, aaminsan tani waa aaminsan in kooxda wadaadka Qodariyah Tataruska u yeedhay majusinya Ummah this.
3. Tani saddexaad shirk waa liidaa (faanayaan Gaalowdo) waxaa seesorang ka shaqaynaynaa wax u talin jiray oo ay Ilaaha Qaadirka ah, laakiin dadka ku sameeyo sababtoo ah ma Ilaaha Qaadirka ah.  Dadka sidan oo kale ma heli abaal marin camalkiisa abaal marin samafalka badalay Mahad wuxuu ka filayaa.
Xadiiska ah Qisadii by Imam at-Tirmidi ku xusan:
عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: (إن أخوف ما أتخوف على أمتي الاشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية) خرجه الترمذي الحكيم.
Laga soo bilaabo Shaddad bin Aus ayuu yiri: Nabiyow, ayaa yiri "dhab ahaantii waxaan ahay ugu cabsan on my ummadu la wadaajin ahu. Ma dhahayo waa cibaadada cibaadada Qorraxda iyo Dayaxa ee ma dhihin oo kuma odhan Caabudi Sanamyo, laakiin shaqada ee aan ahayn ahu iyo damaca aan caddayn "(HR Tirmidi.)
Amarka ka dib ku caabudo oo aan shirkigu Ilaaha Qaadirka ah. Markaas Ilaaha Qaadirka ah, hadduu doono inuu wax wanaagsan in labada waalid sameeyo, sababta oo ah Ilaaha Qaadirka ah oo dhab ah, oo labadoodaba waxaa ka samaynta sababtoo ah ilmahooda. Oo saamigii ah Ilaaha Qaadirka ah, oo ay ka mid wanaagsan in labada waalid ay amarka ka dib markii samayn inay Ilaah u caabudaan Ilaaha Qaadirka ah, oo tusaale u ah Suurad Luqmaan aayadda 14
"Mahadi ani iyo aabbihiis laba hooyooyinka in ay" (Luqmaan: 14)
Oo haddana Eraygii Ilaaha Qaadirka ah:
"Oo Faray Eebahaa inaydaan Caabudin isaga mooyee, oo ha hooyo si fiican u samayn la aabbihiis ugu wanaagsan" (al-Isro: 23)
Ka dib markii amarkii inuu wax wanaagsan in labada waalid sameeyo, Ilaaha Qaadirka ah, amray in ay wanaagsan tahay in وبذي القربى lagu micneeyey kitaabkii Tafsiirka al-Khozin in "wax wanaagsan u sameeya qaraabada in ay wali leeyihiin xiriirka qoyska lagala kulmo labada ka aabbihiis iyo hooyadiis" oo la xiriira in ay sameeyaan Aayaddani waxa uu jiro xadiis Qisadii by Anas bin Malik:
Waxaan maqlay Nabiyow, ayaa sheegay in "cid kasta oo rabta in la la'egayah rizkinya iyo dheerayn ay nolosha, ka dibna uu bersilaturrahim waa"
In xadiis kale Qisadii by Imaam Axmed buugaagta uu Musnad waa:
"Shodaqoh miskiinka waa shodaqoh (oo kaliya), iyo shodaqoh qaraabada waa shodaqoh iyo silaturrahim"
In aayadda kor ku xusan waxa kale oo ku xusan oo ku saabsan Agoonta ah in aan wanaag u sameeya. In xadiis Nabiyow, Waana bishaareeye u nuujiyo Agoonta:
"Waxaan iyo kalkaaliye caafimaad (nanny) Agoonta Jannada sida tan" Nabiyow, gesturing isagoo index farta iyo farta dhexe oo ah xubin ka tirsan meel fog u dhexeeya labada. (HR. Bukhaari)
In xadiiska kor ku Nabiyow, ayaa sheegay in jannada ku jira, dadka xanaaneeya Agoonta noqon lahaa isaga u dhow la masaalkii farta murdisada iyo farta dhexe marka fidiyey. Daryeelka Agoonta, taasina waa camal sharaf leh, laakiin xadka kalkaalisada la siiyey waa in la hayo, tusaale ahaan marka la eego hantida agoon. Kalkaaliyayaasha iyo Agoonta waa in aanay noqon taxadar in isticmaalka Xoolaha agoonta sida ee.
In aayadda kor ku xusan waxaa kale oo jira dad ku saabsan saboolka ah in aan sidoo kale waa wanaag u sameeya. In kitaabkii faallo Ibn Abdissalam sharaxay in masaakiinta waa:
"Ninka masaakiinta, isagaa ah kan maqan ee u baahan ka mid ah oo buuxiya la'aanta waxa ka mid ah"
Dhammaystirka masaakiinta yihiin kuwa shaqada ah, laakiin waxa uu soo saaraa kuma filna kharashka baahiyaha asaasiga ah ay tahay in la soo saaray.
والجار الجنب:. Maksdunya adalh fog deriskaaga ama deriskaaga in aysan jirin wax nasab xiriirka  Dhinaca kale, sida ay al-Shami Nauf waa الجار ah ذي القربى waa Muslim iyo waa الجار ka الجنب waa Nashrani iyo Yuhuudda .
Sidaas daraaddeed waxaa jira fikrado dhowr ah oo ku saabsan halkan deriska ah. Sida kor ku faahfaahsan, laakiin maanka ku hayo waa Islam sida Lil rohmatan Koonka marnaba argagixisada baray ama rabshad, ma baro khasab, Islaamka waa diin waa u fududahay, qurux badan iyo dulqaad. Sidaas oo kale si fudud micnaheedu ma aha sida sahlan u qaaday, oo Islaamku waa diin dulqaad laakiin dulqaad Islaamka waa in aan la xiriira la aaminsan, sida ku qoran dhamaadka suurada al-kafiruun.
In xadiis Nabiyow, ayaa yiri:
Laga soo bilaabo shahaba Jabir bin Abdullah waxa uu sheegay in Nabiyow, ayaa sheegay in "ay deriska jira saddex: (ie) derisyadaada ah oo ay xaq u leeyihiin, isagu waa deris xaq u leeyahay inuu ku hooseeya, (labadaba) deris waxay leedahay laba xuquuqda, iyo deriskaaga qaba saddex midig, deriskiisa tani waa tengga kama dambaysta ah. Sida ee deriska oo ay xaq u leeyihiin waa deriska sanamka in ay jirto ma Jiro Nasab isaga. Derisyadii waxay leeyihiin laba xuquuqda iyada deriska Muslim waxay xaq u leeyihiin sida Muslimiinta iyo sida ay deriska. Deriska kuwaas oo uu leeyahay saddex xuquuqda yihiin deriskooda Muslim kuwaas oo isbahaysi, waxa uu xaq u leeyahay sida deris, sida Muslim ah, oo sida qaraabada "(xadiiska Qisadii by al-Bazzar, sida ku qoran Tafsiirka Ibn Kathir, Qaybta 5 p. 474)
والصاحب بالجنب: qaar ka mid ah waxaad dhahdaa waxaa halkan loogu tala galay waa saaxiib in uu raallinimo, sida saaxiib waxbarashada, ganacsiga, shaqada ama jidka. Waxa kale oo jira ah isagoo sheegay in waxa loola jeedo waa naagtii. 
ابن السبيل = sida ay Ibn Abbas iyo fasalka culimada, waxaa halkan ku nool loogu tala galay.  Dhanka kale, sida uu Imam Mujahid, Abu Jacfar al-Baqir, al-Hasan, al-Dlohhak, iyo Muqotil, Ibn sabil yihiin dadka ku jira safri iyo melwatimu. Waxaa ka mida kuwo ku doodaya in waxa loola jeedo waa nin socoto ah, sababtoo ah ayuu ku cisayn Jidka. 
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا = sida ku cad Tafsiirka Ibn Kathir in Ilaaha Qaadirka ah, oo aan ka jeelahay dadka ku faano, oo kibir is kibriya naftooda mar kale, faankan ee bulshada iyo isagoo u khayr badan. Waxa uu mengaggap naftiisa weyn halka sida Ilaaha Qaadirka ah, qofka xumaan, iyo dadka uu la neceb yahay.
 Tafsiirka Ibn Kathir, Section 5 waxaa 473
Sida hore u soo sheegnay in posts hore in shirkigu Ilaaha Qaadirka ah, ma ahan oo keliya ku koobnayn cibaadada Sidaana, xabaalaha, dhirta, iyo sidaas. Laakiin haddii mid ka mid ah ayaa aaminsan in ay jirto faa'iido ama mudlorot (khatar) ahayn oo Ilaaha Qaadirka ah, ka dibna ay taasi sidoo kale waxaa ka mid ah shirk, tusaale ahaan, waa sida dadka ku xiran qardhaasaha, kooxaha, iyo qaar kaloo badan. Haddii ay rumaysan yihiin in iyaga ka dhigaa inay ka badbaaday ay xidhan yihiin amulet, markii uu in ka akhriso, ama ku qasbi genie ee Sikh isaga oo aan fara gelin ku sameeyeen Ilaaha Qaadirka ah, ka dibna tan waxa hubaal warwareego. Halka haddii ay kaliya xirtaan qardhaasaha, ama la joogay ku tuur ka dibna waxaa jira faa'iidooyin wanaagsan, laakiin uu aaminsan yahay in ay tahay ka Ilaaha Qaadirka ah, ka dibna ay dhacdo in this waxba ma. Waxyaabaha aan ahayn wax badan ka duwan qof dhakhtarka aadi doonto ama iibsadaan dawooyinka, oo wax cabbay daawada ayuu bogsiiyey, hadii uu ka dhaadhiciyay in ay daawo u yahay daawada ama dhakhtarka sababtoo ah waxa ay ku guuleystay in uu ogaado xanuun iyo qori in la fulyo si uu warwareego karo. Inkastoo isticmaalka dheg waa in taxadar in aadan heli joogay in ku akhriyey erayadii ay ku jiraan xubno ka shirk iyo ka sii fiican haddii aadan akhri ama u isticmaalaan kooxaha, taasoo macnaheedu yahay ma cadda in si aan loo dhicin dabinka Ibliiska.
Xataa marka waqtiga Nabiga badan oo ka mid ah Ehelu damcay inuu u sii jihaadka Eebe (Badar, Uxud iyo kuwo kale) laakiin Nabi Muxammed hubsada in ka mid ah saaxiibada ah in ay weli labada waalid, markaa haddii ay jiraan ay u sheegeen inay dib ugu laabato si aad u aragto laba nin oo waalidiinta, taasoo la micno ah filial in labada waalid ee dadka ka muhiimsan jihaadka in dagaalka. Si kastaba ha ahaatee filial waalidiinta in dhammaan waalidiinta casuumay inaan caabudo Eebe kaliya, u furan dadka kale. Like Ibraahim oo ay waalidkiis ka qaaday Ibrahim caabudi jireen sanamyadoodii (taalada) ka dibna diiday Ibrahim, ilaa Ibrahim ayaa laga eryey, laakiin weli Ibrahim sharaf oo ay u duceeyaan wanaagsan ee labada waalid. Sababtoo ah arrimaha ku saabsan labada waalid Hidayah Ibrahim oo kaliya xaq u Eebaa iska leh, Ibraahim uu ahaa mid kooban inuu ku tukado, halka iimaan iyo hanuun oo keliya Ilaah waa awoodaa inuu ku siiyo.
Ibrahim ayaa aabbihiis ugu dambeyntii ku dhintay ku jira xaalad ah kuwa aan rumaysadka lahayn, oo tanuna waa ka baxsan awoodda iyo rabitaanka Nabiga Ibrahim, oo waa sidii nebi oo oo ahaa addoonkii Ilaah. Waa in aan fiiro gaar ah u Hoyaday iyo Aabahay aan gaar ahaan marka ay wali nool yihiin iyo jir mar dambe ka dhigi kartaa nool oo Afguduud. Maxaa yeelay, Ilaah waa ku tiirsan Ridho Ridho waalidiinta noo sheegeen. Iyaga u jeclaan sebagimana ay leeyihiin mengkasihi iyo nolosha noogu daayo laga soo bilaabo bilowgii uurka sagaal bilood iyo toban maalmood, dhalmada waa mid xanuun badan oo adkaysan xanuunka, kor u naas laba sano, si aad noogu diri is. Sidaa darteed budilah soo jawaabin marka nool, oo ay u duceeyaan oo labadoodaba waxaa ka markay dhintaan iyo Xajka iyaga kanlah marka aad Xajka ayaan iyo awood (xusuuso menghajikan) labada waalid geeriyoodaan aan la matalo qof kale adiga ama qof qaraabo ah haddii dhalashada ina gaar ah uu lahaa oo Hajj in dabcan Mecca.